यी १३ वाणिज्य बैंकको लाभांश घोषणा, कुन बैंकको कति ? - Purbeli News
यी १३ वाणिज्य बैंकको लाभांश घोषणा, कुन बैंकको कति ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १०, २०७८ समय: २१:०२:२६
काठमाडौँ। हालसम्म १३ वटा वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन् । बैंकहरुले शेयरधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेका हुन् । बोनस घोषणा गर्नेमा हिमालय, ग्लोबल आईएमई बैंक, माछापुच्छ्रे, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, सानिमा, सिटिजन्स, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ, नेपाल बंगलादेश, एनआइसी एसिया र बैंक अफ काठमाण्डु रहेका छन् ।
बैंकहरुले प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ भने केहीको स्वीकृत हुन बाँकी छ । हालसम्म हिमालयन बैंकले सबैभन्दा धेरै २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने सबैभन्दा कम कुमारी बैंकले ८ दशमलव ६७ प्रतिशत लाभांश बाड्ने प्रस्ताव गरेको छ । कुन बैंकको कति ?
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले सेयरधनीहरूलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १५% बोनस शेयर र ०.७८९४७% नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) गरी कुल १५.७८९४७% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
बैंक अफ काठमाण्डूले १४ % लाभांश दिने
बैंक अफ काठमाण्डूले सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मुनाफाबाट उक्त लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस र ४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले लगानीकर्ताका लागि १५ प्रतिशत लांभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को मुनाफाबाट कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा १४ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । हाल बैंकको चुक्तापूँजी १० अर्ब ९६ करोड २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले १७ प्रतिशत लाभांश दिने
नेपाल बैंक लिमिटेडले बोनस सेयर र नगद लाभांश गरी चुक्ता पुँजीको १७ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १४ प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित ३ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले १३.५० प्रतिशत लाभांश दिने
वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्ना सेयरधनी लगानीकर्ताहरुलाई गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मुनाफाबाट अधिकतम १३.५० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकद्धारा १५.५० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
नेपाल बङ्गलादेश बैंकले यस वर्ष कुल १५ दशमलव ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको असोज २४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मुनाफाबाट १२ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत ३ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका लगानीकर्ताले १३ प्रतिशत लाभांस पाउने
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई १३ दशमलव ०६ प्रतिशत लाभांस दिने भएको छ । संचालक समितिको बैठकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट हालको चुक्तापूँजीको १३ प्रतिशत लाभांस घोषणा गरेको हो ।
कुमारी बैंकको ६ प्रतिशत मात्र बोनस
कुमारी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले मुनाफाबाट ८.६७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । असोज ११ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बैंकको चुक्तापुँजीको ६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित २.६७ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सिटिजन्स बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । बैंक संचालक समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती तथा बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मुनाफाबाट १६ प्रतिशत लाभांश (३.०८७ नगद र १२.९१३ बोनस सेयर) स्वीकृत गरेको छ ।
सानिमा बैंकले सेयरधनीलाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश दिने
सानिमा बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
हिमालयन बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले यस वर्ष २१ दशमलव ३८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत गरी ४ दशमलव ६२ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । यस वर्ष बैंकले विगत तीन वर्षपछिकै उच्च लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०७७/७८को १३.३० प्रतिशत बोनस शेयर र ०.७० प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश दिने
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पूर्वघोषित लाभांश संशोधन गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको संसोधन अनुसार बोनस सेयर पहिला भन्दा १ दशमलव ३७१ प्रतिशतले बढेको छ । अब गत वर्षको नाफाबाट १२.६११५ बोनस सेयर र ३.३८९५ नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि बैंकले ११.२४५ बोनस सेयर ४.७६५ नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । दैनिकनेपालबाट